Maamaulka cusub ee degmada Xarfo & Midkii hore oo maanta xilalkii la kala wareegay, mas?uuliyiin badanna ay ka qaybgaleen. – Radio Daljir
Xarfo, Feb 15 ? Munaasabad ballaaran ayaa maanta lagu qabtay xarunta maamulka degmada Xarfo, taasi oo ay xilalka kula kala wareegayeen maamulkii hore ee degmada iyo midka cusub ee dhawaan la soo magacaabay.
Bashiir Faarax Bile oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Xarfo ee gobolka Mudug ayaa si wanaagsan ugu wareejiyey xilkii degmada guddoomiyaha cusub ee dhawaan la magacaabay C/laahi Faarax Bayle, waxaana halkaasi lagula kale wareegay agabkii degmadu iyo xafiisyadu ay ku adeegan jireen.
Labada mas?uul ee xilalka la kala wareegay, ayaa gababadii xafladda isku hambalyeeyey, waxaana guddoomiyaha hore ee degmada Bashiir Faarax Bile uu halkaasi ka sheegay in uu la shaqayn doona guddoonka cusub ee degmada loo magacaabay.
Munaasabadda xil-wareejinta waxaa ka qaybgalay mas?uuliyiin sar sare oo ka tirsan maamulka gobolka Mudug oo uu ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad, taliyaha qaybta bileyska Col. Muuse Xasaasi, duqa magaalada Galkacyo C/raxmaan Xaaji Xasan, guddoomiyaha golaha deegaanka Galkacyo iyo kuxigeenkiisa, xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Puntland, waxaana sidoo kalana xafladda ka qayb galay dadweyne aad u tiro badan.
Mas?uuliyiintii munaasabadda xil-wareejintaka ka qaybgalay ayaa maanta Qado looga diyaarshay Xarfo, halkaasi oo ay ku sugnaayeen illaa galabta iyagoo kulamo iyo wada-tashiyo ah la yeeshay maamulka cusub iyo qaar ka mid ah waxgaradka degmada Xarfo.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Xarfo ayaa ah guddoomiye uu dhawaan uu degreeto ku magacaabay m/weyne kuxigeenka Puntland Gen. C/samad Cali Shire, waxaana horyaalla caqabado badan oo dhankasta iskugu jira, iyadoo ay jirto baahi badan oo loo qabo hormar degmada laga hirgaliyo dadku ay u harraadan yihiin.